हालसम्म कति सम्पत्ति जोडे यी अभिनेत्रीहरुले – Khabar Silo
बलिउडमा केही समय बिताइसकेका केही यस्ता अभिनेत्रीहरुको कमाइ पनि उच्च रहेको छ । केही यस्ता अभिनेत्रीहरु बलिउडमा रहेका छन् जसको कमाइ बलिउड अभिनेताभन्दा पनि उच्च रहेको छ । बलिउडमा हालसम्म सबैभन्दा बढी कमाउने तथा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडेका अभिनेत्रीहरुको सुची यस्तो रहेको छ ?
आज बलिउडमा प्रियकाको आफ्नै स्थान रहेको छ । हलिउडमा पनि उनको आफ्नै चार्म रहेको छ । निकै परिष्कृत एक्टिङबाट उनलाई चिनिन थालिएको छ । फिल्म अफर गर्दा पनि प्रोडुसरहरु उनलाई राम्रै मुल्य अफर गर्छन् । उनको अहिलेसम्मको कुल कमाइृ ८ मिलियन रहेको छ ।
९. कटरीना कैफ
पछिल्लो समय करिअर ओरालो लागेपछि कटरीना तनाबमा रहेकी छिन् । तर हिन्दी भाषामा सिकेर बलिउडमा राम्रो स्थान जमाउन सकेकी कटरीनाले ९ मिलियन सम्पत्ति जोडेकी छिन् । उनी धेरै ब्राण्डेड सामानहरुको एम्बेसडर पनि हुन् ।
८. करीना कपुर
करीना कपुर सैफ अली खानसँग विवाह गरेर यो स्थानमा भने आएकी होइनन् । उनले आफ्नै बलबुतामा आफ्नो करिअर बनाएकी हुन् । उनले हालसम्म १० मिलियन सम्पत्ति जोडेकी छिन् ।
७. करिश्मा कपुर
केही महिना अघि संजय कपुरसँग डिभोर्स गरेकी करिश्मा आज बलिउड देखि पर छिन् । कुनै समय बलिउडमा राज गरेकी करिश्मा पनि सम्पत्ति जोड्नमा कम रहेकी छैनन् । उनी १२ मिलियन सम्पत्तिकी एकलौटी मालिक्नी हुन् ।
६. इलियाना डिक्रुज
साउथ फिल्ममा राम्रो स्थान बनाएकी इलियानासँग धेरै सफल ब्राण्डहरुको कन्ट्रयाक रहेको छ । उनी राम्रो कमाइ गर्ने अभिनेत्रीमा गनिन्छिन् । उनीसँग १४ मिलियन रुपैया बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।
काजोल बलिउडकी यस्ती नायिका हुन् जसको चार्म आज पनि उस्तै रहेको छ । ‘कभी खुशी कभी गम’ ‘दिवाले दल्हनीया ले जायेंग’े जस्ता सुपरहिट फिल्म गरेकी काजोलको १५ मिलियन रुपैया बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।
४. दीपीका पादुकोण
यी अभिनेत्रीको जति तारिफ गरेनी कमै हुन्छ । हरेक कुरालाई व्यक्त गर्ने दीपिको अलग अन्दाज रहेको छ । दीपिकालाई आफ्नो फिल्ममा साइन गराउन निर्माताहरु महिनौ उनको पछि लाग्ने गर्छन् । उनीसँग १६ मिलियन रुपैया बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।
३. अमृता राव
साउथमा ठुलो सफलता पाएकी यी अभिनेत्रीको साहिद कपुरसँगको अफयेर ठुलो चर्चामा रहेकी थिइन् । तेलुगु फिल्ममा सफल रहेकी यी अभिनेत्रीसँग २० मिलियन रुपैया बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।
अमिषा पटेलको बलिउडमा चार्म खासै रहेको छैन । सुरुमा उनले खेलेका सुपरहिट फिल्महरुका कारण उनी हालसम्म पनि चर्चामा रहेकी छिन् । अमिषासँग ३० मिलियन बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।
बलिउडदेखि हलिउडसम्म आफ्नो नाम फैलाएकी ऐश आज पनि बलिउडमा उत्रिकै सक्रिय रहेकी छिन् । ऐशको कुनै समय धेरै इन्टरनेशनल ब्राण्डसँग सम्बन्ध रहेको थियो । त्यही कारण पनि उनको कमाइ अन्य अभिनेत्रीभन्दा उच्च रहेको थियो । उनीसँग कुल ३० मिलियनको सम्पत्ति रहेको छ ।